ချမ်းလင်းနေ Chanlinnay: ကန္တာရ မိုးသားမိုးရိပ်များ နှင့် မြန်မာစာရေးဆရာ၊ ဆရာမများ၏ စာပေဟောပြောပွဲများ အပိုင်း(၃)
ကန္တာရ မိုးသားမိုးရိပ်များ နှင့် မြန်မာစာရေးဆရာ၊ ဆရာမများ၏ စာပေဟောပြောပွဲများ အပိုင်း(၃)
စာပေဟောပြောပွဲဆိုတာ တကယ့်ကို ပညာဗဟုသုတ စာပေအနှစ်သာရပေးတဲ့ စကားဝိုင်းတစ်ခုပါပဲဗျာ။ သက်ကြီးစကား သက်ငယ်ကြားဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာ။ မြန်မာတွေအကြာင်း၊ မြန်မာတို့၏ သမိုင်းကို မြန်မာလူကြီးများက မြန်မာလူငယ်ကလေးများကို လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်တဲ့ အမွေတွေပါပဲ။
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက စာပေဟောပြောပွဲဆိုတာ အရမ်းခေတ်စားခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စာသင်ကျောင်းတွေ၊ မြို့နယ် ရပ်ကွက်တွေမှာ နတ်တော်လ စာဆိုတော်နေ့ဆိုရင် နာမည်ကျော် စာရေးဆရာကြီးများ၊ ကဗျာဆရာကြီးများ၊ အနုပညာရှင်ကြီးများ လာရောက်ပြီး သူတို့ဖတ်မှတ်ခဲ့သော စာပေဗဟုသုတများ၊ ရသများ၊ သူတို့၏ ဖြတ်သန်းလာခဲ့ကြသော ဘဝအတွေ့အကြုံများ၊ သူတို့သိမှီခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်ကျော် ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများရဲ့အကြောင်းများကို နောင်လာနောက်သား လူငယ်များ သိမြင်အတုယူနိုင်ဖို့ လက်ဆင့်ကမ်းဝေမျှခဲ့ကြပါတယ်။
ယေဘူယျအားဖြင့် စာပေဟောပြောပွဲများတွင် တွေ့ရှိရတာတွေကတော့ အများအားဖြင့် လူငယ်တွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဟောပြောကြတာများပါတယ်။ လူကြီးတွေက နောင်တစ်ချိန်မှာ လူငယ်လူရွယ်တွေရဲ့ အသိပညာ အတတ်ပညာတွေကို အရမ်းကို မျှော်မှန်းထားကြတာပါ။ လူငယ် လူရွယ်တွေပဲ နောင်အနာဂတ်ကို ဦးဆောင်မယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ကြလို့ပါ။ လူငယ်လူရွယ်တွေ အနေကလည်း စာပေဟောပြောပွဲတွေကတဆင့် နောင်ဖြစ်လာမည့် ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်တွေ မြင်လာမယ်၊ ရိုးရာအစဉ်အလာမပျက် ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြတဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာများကိုလည်း စာပေပညာရှင်တွေကနေတဆင့် သိရှိလာကြပါတယ်။ တကယ့်ကို နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အကျိုးရှိတဲ့ ဓလေ့တစ်ခုပါ။
ဒီလို စာပေဟောပြောပွဲ အစဉ်အလာလေးဟာ အင်မတန်မှကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မြန်မာလူမျိူးတို့၏ လက်ဆင့်ကမ်း အမွေဆက်ခံခြင်းလို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်လက်ခံပါတယ်။ အဲဒီလို စာပေဟောပြောပွဲတွေတောင် မဟုတ်ပဲ မိမိတို့ အဘိုးအဘွား၊ သက်ကြီးရွယ်အို၊ ပညာရှိကြီးများက အိမ်မှာ စကားလေးများ စုဖွဲ့ပြီး ပြောပြကြရင်တောင်မှ သူတို့အနားကနေပြီး ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေ သွားရောက် နားထောင်ခဲ့ကြရတာ အလွန်ကိုမှ နားထောင်ကောင်းလှပါတယ်။ မြန်မာ့ရိုးရာ ပုံတိုပတ်စများ၊ စကားထာ စကားပုံများ၊ ကဗျာ လင်္ကာများ၊ မြန်မာ့ရှေးခေတ် တေးသီချင်းများ၊ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ် သမိုင်း အစဉ်အလာများ၊ ပါးစပ်ရာဇဝင်များ စသဖြင့် ကောင်းနိုးရာရာ ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ် စကားများကို ကြားသိမှတ်သားခဲ့ရတာဟာ အင်မတန်မှ ကောင်းလှတဲ့ အလေ့အကျင့်လေးတစ်ခုပါ။
ရှေးယခင်တုန်းက တောရွာလေးတွေမှာ စာတတ်ပေတတ် လူကြီးတွေက ပညာဗဟုသုတအမွေကို ထိုထိုသော စကားဝိုင်းတွေထဲမှ လူငယ်လူရွယ်များကို မျှဝေခဲ့ကြပါတယ်။ ကျောင်းတွေမှာ စာပေသင်နိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်း မရှိနိုင်ကြတဲ့ ထိုကျေးလက် ဒေသမှ ကလေးလူငယ်တွေအဖို့ လူကြီးစကားဝိုင်းလေးတွေဟာ ပညာပေးရာ နေရာလေးတစ်ခုပါပဲ။
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က စာပေဟောပြောပွဲလေး စနားထောင်ဖူးခဲ့တာကတော့ ရွှေတောင်ကုန်း သာသနာ့ရိပ်သာမှ နှစ်စဉ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းလေးမှ စတင်ပြီး နားထောင်ခဲ့ဖူးတာပါ။ ရွှေတောင်ကုန်း သာသနာ့ရိပ်သာ ဆရာတော်ကြီးမှ ကလေးလူငယ်များကို တစ်လတာမျှ သာသနာ့ဘောင်ကို သွတ်သွင်းပေးပြီး အခြေခံဗုဒ္ဓ ယဉ်ကျေးမှုစာပေများကိုသာ သင်ကြားပေးရုံ သာမက သင်တန်းကာလ တစ်လတာအတွင်း အခါကြီးရက်ကြီး ဥပုသ်နေ့များတွင် လူငယ်များအတွက် စာပေပညာရှင်များကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး စာပေဟောပြောပွဲများ ကျင်းပပေးပါတယ်။
အဲဒီတုန်းကဆို (ကျွန်တော် မှတ်မိသလောက်) စာရေးဆရာမ မစန္ဒာ၊ သိပ္ပံမှုးတင်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စတဲ့ စာတတ်ပေတတ် ပညာကျော်တွေက လာရောက်ပြီး ကိုရင်လေးတွေ၊ သိက္ခာရှင်(သီလရှင်)လေးတွေ အတွက် လာရောက်ပြီး စာပေပညာဗဟုသုတ အဖျာဖျာကို မျှဝေပေးကြပါတယ်။
ဆရာသိပ္ပံမှုးတင်ဆို ကျွန်တော် သုံးနှစ်ဆက်တိုက် ရွှေတောင်ကုန်းမှာ ကိုရင်ဝတ်တဲ့ သုံးနှစ်လုံး သူလာဟောပါတယ်။ သူလာရင်ကို ကိုရင် သိက္ခာရှင်တွေအားလုံး သိကြပါပြီ။ ဆေးလိပ်တိုက်ဖျက်ရေး ဟောတော့မယ်။ နောက် သူထုတ်ပြလေ့ရှိတာက ဆေးလိပ်သောက်လွန်းလို့ ကင်ဆာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆေးစိမ်ထားတဲ့ အဆုပ်ကြီးပဲ။ အဲဒီတုန်းကဆို ကျွန်တော်တို့ ကလေးတွေက သူ့ကို အစုပ်ဆရာကြီးရယ်လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။
ဒီဆရာကြီးနဲ့ ကျွန်တော် အတော်ရေစက်ဆုံသဗျ။ ကျောင်းမှာ ကျန်းမာရေး ဟောပြောပွဲဆိုပြီး သွားကြည့်တော့ ကျွန်တော်တို့ အစုပ်ဆရာကြီးလို့ ခေါ်ခေါ်နေတဲ့ ဆရာသိပ္ပံမှူးတင်ပဲဗျာ။ အင်မတန်လေးစားဖို့ကောင်းပါတယ် သူဟာ မြန်မာပြည်က လူငယ်တွေအတွက် ဆေးလိပ်တိုက်ဖျက်ရေး ပညာပေးကို အစွမ်းကုန် ဟောပြောလှုပ်ရှား သွားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ သူ့ကိုမှီဖူး နားထောင်ဖူးသူတွေတော့ သိကြပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီတုန်းကဆို ဆရာမကြီး မစန္ဒာဟောပြောချက်ကို အရမ်းသဘောကျခဲ့တယ်။ သူဟာ စာတွေအရမ်းဖတ်၊ ပညာတွေအရမ်းတတ်ပြီး ဘာသာတရား မယုံကြည် ကွန်မြူနစ်ဝါဒပေါ်ရပ်တည်နေတဲ့ သူ၏ခင်ပွန်း အကြောင်းကို သူမ၏ ခင်ပွန်းဘေးနားထားပြီး ဟောပြောခဲ့တာ အမှတ်ရသေးပါတယ်။(သူ့ခင်ပွန်းကလည်း ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုသာ လိုက်လာတာ ရဟန်းသံဃာတွေမပြောနဲ့ ဘုရားတောင် ဦးမချဘူးဗျာ။) ဆရာမကြီး၏ ရိုးသားဖြောင့်မှန်သော ပွင့်လင်းတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို တွေ့ရတော့ အရမ်းကို လေးစားမိခဲ့ပါတယ်။
သူပြောတဲ့ အကြောင်းတွေထဲက ကျွန်တော်အပေါ် အမြဲအမှတ်ရစေခြင်းတစ်ခုက လူတွေဟာ စာတွေ ဘယ်လောက်ပင်ဖတ်ဖတ်၊ ပညာတွေ ဘယ်လောက်ပင်တတ်တတ် အများအကျိုးမကြည့် ကိုယ်မှန်ရာစွဲကိုင်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိသူတွေဟာ တစ်ဘက်စောင်းနင်း နိုင်တတ်တယ်ဆိုတာ ဆရာမကြီး ပြောဟောသွားတာ မမေ့ခဲ့ပါဘူး။ မွေးဖွားခြင်းနဲ့စတင်ပြီး သေဆုံးခြင်းနဲ့ အဆုံးသတ်တဲ့ ကြားထဲမှာ လူတွေကို ကောင်းကျိုးပေးဖူးလား ဆိုတာရော၊ မိမိဆိုးကျိုးဖြင့် လောကကြီး အရုပ်မဆိုးစေသင့်ကြောင်း ဟောသွားခဲ့တာပါ။
နောက် ဆရာအောင်သင်း သူကတော့ လူငယ်တွေ အကျိုးအတွက် ဟောပြောတဲ့နေရာမှာတော့ နာမည်ကြီးပဲ။ ကျွန်တော် သူစာပေဟောပြောပွဲ စနားထောင်ဖူးတာ တိတ်ခွေနဲ့ခေတ်က။ လူကိုယ်တိုင် ဟောပြောတာကိုတော့ မနားထောင်ဖူးပါဘူး။ မြို့နယ်အတော် များများမှာတော့ လှည့်ပြီး ဟောပြောနေတာ တော့ကြားတယ်။ သူ့စာပေဟောပြောပွဲတွေက အဲဒီခေတ် ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေအတွက် အရမ်းကို အဖိုးတန်တဲ့ အားဆေးတစ်ခွက်ဗျာ။
အထက်တန်းကျောင်းတွေ ပြီးလို့ ဝေလေလေနဲ့ ဟိုသင်တန်းယောင်ယောင်၊ ဒီသင်တန်းယောင်ယောင်၊ ဒူဝေဝေနဲ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်လိုလို၊ အရက်ဆိုင်လိုလို ခြေဦးလှည့်နေကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေကို စိတ်ခွန်အား ပေးစေတဲ့ ဆရာအောင်သင်း၏ စကားများ၊ စာအုပ်များက ရည်ရွယ်ရာမဲ့ ကျွန်တော်တို့၏ ခြေလှမ်းများကို ရပ်တန့်စေခဲ့ပြီး လားရာမဲ့ အရွှေ့များကို လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် တင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ စွမ်းပကားများဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာက စာပေဟောပြောပွဲတွေဟာ နယ်ဒေသတွေကပဲ အလေးထား လုပ်လာတာကို တွေ့ရတော့ စိတ်ထဲပီတိဖြစ်တာရော၊ စိတ်မကောင်းတာရော ဖြစ်မိတယ်။ စိတ်ထဲပီတိဖြစ်တာက နယ်ဘက်ကလူတွေဟာ စာပေဗဟုသုတကို မြို့ကလူတွေထက် ပိုအလေးထားတာ တွေ့ရလို့ပါ။ မြို့ကလူတွေကတော့ အချိန်မရ၍လော၊ စာအုပ်တွေ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူဖတ်ရှုနိုင်၍လော၊ စသည်ဖြင့် သို့လောသို့လော အခြေအနေများဖြင့် စာပေဟောပြောပွဲများ မြို့ကြီးပြကြီးများတွင် နည်းလာတာ စိတ်မကောင်းစရာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အမိမြေမှ ဝေးကွာသူများ အဖို့တော့ စာပေဟောပြောပွဲများကို နိုင်ငံရပ်ခြားများတွင် တတ်နိုင်သ၍ လုပ်လာတော့ ကျွန်တော် စာပေချစ်မြတ်နိုးသူ၊ စာသံပေသံ ငတ်မွတ် နေသူအဖို့ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကန္တာရ မိုးသားမိုးရိပ်များ၊ မိုးရေစက်များကဲ့သို့ စာပေဟောပြောပွဲများကို ဟိုမှတစ်စက် ဒီမှတစ်စက် တတ်နိုင်သမျှ ရနိုင်သမျှ လိုက်လံစုဆောင်းကာ ကိုယ်လည်းသောက်၊ အများတကာလည်းသောက် Win-Win သဘောတရားဖြင့် စုဆောင်းတင်ပြလိုက်ပါသည်။
( စာတွေမရေးသေးပဲ ဆားချက်နေတယ်ထင်မှာဆိုးလို့ ကျွန်တော် ဟိုမကျ ဒီမကျ ချရေးလိုက်ရပါတယ်။ နောင်တင်မည့်ပိုစ်ကို ကကြီးခခွေးအိုင်တီ(IT for Kids) လို့တော့ အမည်ပေးထားသည်။ ကလေးငယ်လေးတွေ ကွန်ပျူတာလေ့လာသင်ယူရေး အတွက် သူတို့မိဘတွေ ဘယ်လို ဂိုက်လိုင်းပေနိုင်မည့်အကြောင်း ကွန်ပျူတာဗဟုသုဆောင်းပါးလေးပါ။ မကြာမီ....လာမည်မျှော်။ ကြိုတော့ပြောပါရစေ။ ကျွန်တော် ရေးနေကြ ရသလိုင်းထဲကနေ ကွဲထွက်နေမယ့် ဆောင်းပါးမို့လို့ တင်တဲ့အခါ ပြီးအောင်ဖတ်စေချင်ပါတယ်။)
ဆရာအော်ပီကျယ် - မြန်မာတွေ ပျော်ပါစေ
ဆရာမောင်သာချို (ဂျက်ကွမ်းခြံကုန်း) - ရယ်စရာမောစရာ
ဆရာအောင်ကျော်ဆန်း - ကနောင်အလွမ်း ထူးဆန်းထွေလာ မြေကမ္ဘာ
Los Angeles အမျိုးသားနေ့စာပေဟောပြောပွဲ (၅.၁၂.၂၀၁၀)
ဆရာမခက်မာ - ခံစားမှုကိုမျှဝေခြင်း
ဆရာမောင်စွမ်းရည် - ရာပြည့်စာရေးဆရာကြီး
ဆရာမမေငြိမ်း - လူငယ်နှင့်အနုပညာ
ဆရာဦးဝင်းဖေ - စာပေနှင့် အနုပညာ
စာရေးသူ ချမ်းလင်းနေ အချိန် 6:33 AM
leo February 26, 2011 at 8:54 AM
အသံဖိုင်တွေ အားလုံး ယူသွားတယ်အကို။ ခုလိုမျိုး စာပေဟောပြောပွဲတွေကို တစုတဝေးတည်းတွေ့ရတဲ့ အတွက် ၀မ်းသာမိသလို စု ပေးတဲ့ အကို့ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အကိုပြောတဲ့ ဆရာမ မစန္ဒာ ရဲ့ အသံဖိုင်ရှိရင်ကောင်းမှာပဲဗျာ။ အကိုမှတ်မိ သလောက်လေး ပြန်ရေးပေးပါ့လား ။ ဆရာကြီး သိပ္ပံ မှူးတင် ရဲ့ ဆုံးမစာတွေကိုလည်း မှတ်မိသလောက်ပေါ့ ။
နောက် ရေးမဲ့ သားသားမီးမီးတို့ အတွက် အိုင်တီ ကကြီး ခခွေး ကို မျှော်နေပါတယ်။
not sein ye. it's 'mg swan ye'.
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) February 27, 2011 at 3:22 AM
အခုလို စေတနာ သန့်သန့်နဲ့ အချိန်ယူပြီး တင်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ။ ကျနော်လဲ ဒေါင်းထားလိုက်တော့မယ်။
ဆူးသစ် February 27, 2011 at 7:36 AM
စာပေဟောပြောပွဲတွေ စုစည်းပြီးတင်ပေးထားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တစ်ခုလောက် အကြံပြုပါရစေ။ စာရေးရင် စကားပြောဆို စာသားပုံစံ ရေးတာ ရောမရေးသင့်ပါဘူး။ ဥပမာ-'နောင်ဖြစ်လာမည့် ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်တွေ မြင်လာမယ်' ဆိုတာမျိုးမှာ 'နောင်ဖြစ်လာမယ့်' ဆိုတာမျိုး ရေးချင်ရေး၊ ဒါမှမဟုတ် 'မြင်လာမည်'ဆိုတာမျိုး ရေးချင်ရေးရတာပါ။ တစ်ပုဒ်လုံးအဲဒီလို ဟန်ချက်ညီနေမှ ဖြစ်မှာပါ။ ဘလော့ရေးဖော်တစ်ဦးအနေနဲ့ အကြံပြုတာပါ။ ဆရာလုပ်တာ မဟုတ်ကြောင်းပါ။
တောက်ပကြယ်စင် February 28, 2011 at 6:28 AM
ကိုချမ်းလင်းနေရေ မင်္ဂလာပါ၊ အမုန်းခံပြီး ပြောစရာတစ်ခုရှိလို့ ဥပုဒ်ဆိုတာ ဥပေါသထဆိုတဲ့ ပါဠိပုဒ်က ဆင်းသက်လာတဲ့ ပါဠိပျက်ဖြစ်တာကြောင့် ဥပုဒ်နေ့အစား ဥပုသ်နေ့လို့ရေးကြတာ ထင်တယ်နော်။ ၉၉-ရာခိုင်နှုန်းရှိသော ကောင်းကွက်ကိုပြောဘဲနဲ့ မဆိုစလောက်အမှားလေးတစ်ခုကိုများ သွားပြီးပြောမိလို့ စိတ်တော့မဆိုးပါနဲ့ဗျာ(မခင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတော့ အဲဒီလို သွားမပြောရဲပါဘူး၊ ကြောက်တယ်)ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ
ချမ်းလင်းနေ March 1, 2011 at 4:35 AM
ဦးဇင်း တောက်ပကြယ်စင်ကိုရော၊ ကိုဆူးသစ်ကိုပါ ကျွန်တော် သတ်ပုံအမှားတွေ ကူညီဖြေရှင်းပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမှားတွေလဲ ပြင်ပြီးသွားပါပြီ။ နောင်လဲ ကျွန်တော်ဆီမှာ အမှားများရှိရင် ကူညီပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) March 1, 2011 at 10:52 AM
ဟောပြောပွဲတွေကို မသွားနိုင်သူတွေမို့ ခုလိုဝေမျှပေးတာတွေအတွက် ကျေးဇူးသိပ်တင်ပါတယ်...
အဖြူရောင်နတ်သမီး March 2, 2011 at 8:27 PM
ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက် ဆိုတဲ့ ဧကံဖြိုး
သူရာနတ်သမီး၏ စလယ်ဆုံး ကကွက်များ
မြန်မာ စာရေးဆရာ၊ ဆရာမများ၏ စာပေဟောပြောပွဲများ အပို...
ကန္တာရ မိုးသားမိုးရိပ်များ နှင့် မြန်မာစာရေးဆရာ၊ ဆရ...